ပြောင်းလဲခြင်း - Popular
သူငယ်စဉ်ကတော့ ပြောင်း စိုက်၊ ပြောင်းချိုး၊ ပြောင်းဖူး ပြုတ်အပြင်၊ အားသော အချိန်ကလေးများ၌ ထင်းခွေ၊ တောတက်၊ ပန်းရံ၊ လက် သမား၊ လိုအပ်သူကခေါ်လျှင် ခေါ် သလို၊ အောက်ခြေသိမ်းလုပ်၍ ငွေ ပိုငွေလျှံလေး ရတတ်သေး၏။ ယခု တော့ အသက်အရွယ်ကကြီး၊ ခါး ကကိုင်းချိန်ဖြစ်ပြီမို့ ပြောင်းဖူးရိုးပင် မနည်းနိုင်အောင် ဆွဲနေရပေပြီ။ စဉ်းစားနေရင်းမှာပင် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ရေစက်ကလေးများ ကျလာ၍ အဘိုး အိုထိတ်ခနဲ မော့ကြည့်မိသည်။ ကောင်းကင်က မှိုင်းညို့လာပြီ။
“တောက်၊ ဒီမိုးကလည်း စဲကို မစဲနိုင်ဘူး”
အဘိုးအို မိုးကိုကြည့်၍ ကျိန်ဆဲ လိုက်သည်။
“ပြောင်းဖူးပြုတ်က ရတော့မယ် ဆို ဒီမိုးက လုပ်ပြီ”
အဘိုးအိုညည်းတွားရင်း မိုးမကျမီ ထင်းမီးကို အရှိန်မြှင့်ထိုး ကာ မီးပြောင်းစုတ်နှင့် အားကုန်မှုတ် လိုက်သည်။ မီးပြောင်းက မကောင်း တော့၍ မီးက လိုသလောက် တောက်လောင်မှုမမြန်ဆန်။ ထိုစဉ် မှာပင်..
အနီးနားမှ အသံကြား၍ အဘိုး အို အံ့အားသင့်သွားသည်။
လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်က ဘယ်လို၊ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ရောက်နေမှန်းမသိသောလူတစ်ဦး သူ့အနောက်မှာ ခုံတစ်လုံးနှင့် ကျကျ နန ထိုင်နေသည်။
လူပုံက သပ်သပ်ရပ်ရပ်မဟုတ်။ ခေါင်းကစုတ်ဖွားဖွား၊ တိုက်ပုံက ရိုးရာအင်္ကျီလားမသိသော ဖျင်အင်္ကျီ ခပ်နွမ်းနွမ်းကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ပခုံးတွင်လည်း အရောင်အဆင်း ခန့်မှန်းရခက်သော ခပ်နွမ်းနွမ်း လွယ်အိတ်ကလေးတစ်လုံး လွယ် ထားသည်။ ထို့အပြင် ဝတ်ထား သော ပုဆိုးကပါ ခပ်နွမ်းနွမ်းမို့ ခြုံ ပြောရလျှင် မီးဖိုရှေ့က အဘိုးအိုနှင့် စာလျှင် အင်္ကျီရှိတာနှင့် မရှိတာသာ ကွာလိမ့်မည်။ အဘိုးအိုက ထိုလူငယ် ကို ကြည့်ကာ အံ့အားသင့်စွာဖြင့်…
ခပ်နွမ်းနွမ်းလူက ခပ်နွမ်းနွမ်း ပြုံးကာ
“ခင်ဗျားဘဝကို ပြောင်းလဲပေး မယ့်သူ”
အဘိုးအို အံ့အားသင့်သွား သည်။ ထိုသူစကားကိုလည်း သူသိပ် ပြီး သဘောမပေါက်လှ။ သူဘာတွေ ပြောင်းလဲသင့်သည်ကို တစ်ခါမျှ မစဉ်းစားဖူးပေ။ ထိုသူမှပင်..
“ကျုပ်တို့ပြည်ကြီး မတိုးတက် တာ၊ ပြောင်းလဲခြင်းကို သဘော မပေါက်လို့ မတိုးတက်တာဗျ။ ဒါကို နားလည်လား”
အဘိုးအိုက ဇဝေဇဝါ ခေါင်းခါ သည်။ ထိုသူက မဲ့ပြုံးပြုံးပြီး …
“အဲဒါပဲဗျ။ အဲဒါပဲ။ ပြောင်းလဲ ချိန်တန်နေတာတောင် ဘာမှမသိဘဲ ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေသူတွေကြောင့် မတိုးတက်တာ။ သူများနိုင်ငံတွေကို ကြည့်၊ ကိုရီးယားကိုကြည့်မလား၊ ဂျပန်ကိုကြည့်မလား”
အဘိုးအို ထိုသူပြောတာ တစ်ခု မှ နားမလည်။ ထိုသူမှပင်ဆက်၍ အာပေါင်အာရင်းသန်သန်ဖြင့် …..
“ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ အာဏာ ရှင်ခေတ်၊ စစ်အစိုးရခေတ်၊ ဒီမိုက ရေစီခေတ်ထိ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နှစ် ခါ စဉ်းစားဖူးလဲ”
ပဒေ သရာဇ်ခေတ်မှာလည်း ကျောမွဲ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် ပြောင်းလဲလာ လည်း ကျောမွဲ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲမရှိခဲ့တော့ ခင်ဗျား တို့ဘဝဘယ်လိုလုပ်ပြီး မြောက်မှာ လဲ။ ဦးနှောက်ကို လွှာသုံး၊ မှန်ကန် တဲ့ဘက်က ရပ်တည်၊ ပြောင်းလဲခြင်း ကို လက်ခံနိုင်မှ တိုးတက်ခြင်းကို ရမှာပေါ့”
အဘိုးအိုငေးကြည့်နေသည်။ ထိုသူဘာကို ဆိုလိုနေမှန်း သူလည်း မသိ။
“တချို့ကရှေ့ကလည်း မသွား၊ နောက်ကလည်းမလိုက်၊ ဘေးတိုက် လွယ်အိတ်လိုလိုက်နေကြတော့ ဘယ်လိုလုပ် တိုးတက်မှာလဲ++
အဘိုးအိုဝေ့ကြည့်သည်။ သူ့မှာ လွယ်အိတ်မရှိတော့ မသိ။
“အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆို ရီပါပ လစ်ကင်နဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုပြီး ပါတီကြီးနှစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့နှစ်ခုက ပဲ သက်တမ်းတစ်ခုစီ ပြောင်းလဲပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ တိုးတက်ခြင်းတွေ ရခဲ့တယ်။ ခု ခင်ဗျားဆို သက်တမ်းတစ်လျှောက် မှာ ဘယ်မှာပြောင်းလဲခဲ့လဲ”
အဘိုးအို နားမလည်။ ဘာကို ပြောင်းလဲရမလဲသူမသိ။
“ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ။ ပြောင်း လဲချိန်တန်ပြီ။ ပါးစပ်ကကုန်း အော် နေပြီး ဘာမှဆက်မလုပ်ခဲ့လို့ ဒီလိုပဲ ခံနေရတာပေါ့ဗျ။ မဟုတ်ဘူးလား”
သူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးမေး၍ အဘိုး အိုယောင်ပြီး ခေါင်းညိတ်မိသည်။
“တိုးတက်ခြင်းအစ ပြောင်းလဲ ခြင်းကဆိုတာ လက်ခံလား” အဘိုးအို ခေါင်းကုပ်သည်။ ပြီးမှ …
“ကျုပ်ကဘယ်လို ပြောင်းလဲရ မလဲ” ထိုသူက ခပ်ဖွဖွပြုံးလိုက်သည်။ ပြီးမှ …
“ခင်ဗျားမှာ ပြောင်းလဲချင်စိတ် လိုတယ်။ ခင်ဗျားသာ ပြောင်းလဲချင် စိတ်ရှိရင် ကျုပ်ကခင်ဗျားကို ပြောင်း လဲပေးမယ်”
အဘိုးအိုစိတ်ကူးထဲ တိုက်အိမ် ကြီးပေါ်လာသည်။ ပြောင်းဖူးသည် အမယ်ကြီး ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နှင့် ပြုံးပြုံးကြီး ပေါ်လာသည်။ သူ၏ သားမြေးများ မော်တော်ကားစီး၍ မုန့်ထုပ်များနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ သူတို့ လင်မယားကို လာကန်တော့သည် များ ပေါ်လာသည်။ မြေးငယ်များက ခြံဝင်းထဲက မြက်ခင်းပေါ် ပျော်ရွှင် စွာ ပြေးဆော့ကစားနေကြလေပြီ။ အဘိုးအို အပြုံးပန်းများ ပွင့်လာ သည်။ ထို့ကြောင့် အားတက် သရောဖြင့်
အဘိုးအို၏စကားကို ထိုသူက ကျေနပ်ပီတိဖြစ်စွာ ပြုံးသွားပြီး
အဘိုးအိုက ခေါင်းကိုခပ်သွက် သွက်ညိတ်ပြီး …
“သေချာတယ်ဗျ။ သေချာ တယ်”
“သေချာတယ်ဆို ရော့၊ ကျုပ်က ခင်ဗျားကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲပေး လိုက်မယ်ရော့”
ထိုသူ့လွယ်အိတ်စုတ်ထဲက တစ်စုံတစ်ခု ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
ထိုအရာကိုကြည့်ပြီး အဘိုးအို အံ့အားသင့်သွားသည်။ သူမြင်နေရ တာ ဝါးဆစ်ပိုင်းတစ်ခု။ သူ့စိတ်ထဲ မှာ မှော်တုတ်ကလေးလားအမှတ်နဲ့ လှမ်းယူကာ….
အဘိုးအို အသေအချာကြည့် သည်။ မှန်ပါ့ မီးပြောင်းမှဝါးမီးပြောင်း အစစ်ကြီး။
အဘိုးအို တက်ချင်သလိုပါ ဖြစ်သွား၏။
“ဟုတ်တယ်လေ။ ခင်ဗျားမီး ပြောင်းအဟောင်းအစုတ်ကြီးနဲ့ ထိုင်မှုတ်နေလို့ မီးကဘယ်လိုတောက် မှာလဲ။ ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲပြီး မှုတ်ကြည့်”
ဆိုပြီး လူငယ်ငေါက်ခနဲ ထ ထွက်သွားသည်။ အဘိုးအိုနှင့် မလှမ်းမကမ်းကို ရောက်မှ အသံ ကျယ်ကျယ်ဖြင့် …
“လူတစ်ယောက်ကို ငါပြောင်း လဲပေးနိုင်ပြီဟေ့။ ပြောင်းလဲပေးနိုင် ပြီ။ ဟား ဟား ဟား”ဟူသော အားရ ဝမ်းသာ အော်သံကို ကြားရသည်။ အဘိုးအိုမှာ လက်ထဲရှိသော မီးပြောင်းအသစ်ကို ကြည့်လိုက်၊ သုံးနေကျ ဝါးမီးပြောင်းအဟောင်း ကိုကြည့်လိုက်နှင့် ဇဝေဇဝါဖြစ် နေသည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။ အတန်ကြာမှ သက်ပြင်းချပြီး ….
“ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလေ” ဟု ဆိုကာ ဝါးမီးပြောင်းအဟောင်းကြီး ကို မီးဖိုထဲ ပစ်ထည့်လိုက်သည်။ နောက် ခုနကလူပေးသွားသော ဝါး ပြောင်းအသစ့်ဖြင့် မီးကိုကုန်းမှုတ် လိုက်သည်။
“အံမယ် ပြောင်းလဲလိုက်တော့ လည်း မှုတ်လို့အကောင်းသားဟ”အဘိုးအို ကျေနပ်သွားသည်။